सुरुमा म’जा लिएर हेर्छन अ’न्तिममा छि छी ग’र्छन : सरस्वती लामा ( भिडियो हेर्नुहोस ) – Life Nepali
सुरुमा म’जा लिएर हेर्छन अ’न्तिममा छि छी ग’र्छन : सरस्वती लामा ( भिडियो हेर्नुहोस )
नेपाली रक गीत गाएर दर्शकसाझ चर्चा कमाउन सफल भएकी गायिका हुन् स’रस्वती लामा। हाल उनी स्टेजमा कार्यक्रमहरुमा हिपहप र रक गीत गाउदै नाच्न र नचाउननै व्यस्त छिन्। उडि जाने हावा बोलको गीतबाट गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन। सोलुखुम्बु जिल्लाकी सरस्वती लामा ह’ट कलाकारको लिस्टमा पर्ने गर्छिन्। उनलाई महोत्सबकोे समययमा स्टेजकोे कार्यक्रममा भ्या’ईनभ्याइ हुन्छ। *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
उनलाई कार्यक्रमहरुमा दर्शक श्रोताहरु तान्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। महगो पारिश्रमीक लिने गायिकाको रुपमा उनको नाम पनि आउने गर्दछ। उनले भल्गर गायिका रुपमा कतिपय दर्शकहरुले चिन्ने गरेका पनि छन। उनले गीत लेख्ने देखि लिएर सङ्गीत दिने भिडियो निर्देशन तथा मो’डलिङ पनि आफै गर्छिन्। उनले गाएका कतिपय गीत चर्चामा पनि रहेको छ। गीत लेख्नेदेखि संगीत भर्ने र भिडियो निर्देशन समेत आफै गर्ने उनी गीत गाएर भन्दा पनि अ’ङ्ग प्र’दर्शनले चर्चामा आइरहेकी छन्।
उनको सक्रियता गीतमा मात्र छैन मोडलिङमा पनि छ। तर यता धेरै काम गर्दा पनि उनलाई चिन्नेहरु गायिका वा मोडल मात्र भन्दा पनि भल्गर गायिका भन्छन्। एक युट्युब च्यानलसँगको कुराकानीमा उनले दर्शकले आफ्नो प्रस्तुतिले मनोरंजन लिन्छन् अनी छिछि भन्दै गाली गर्ने गरेको गु’नासो गरेकी छिन्। धेरै मानिसहरु छन् जो आउँछन् सेल्फी खिच्छन्। प्रस्तुतीमा रमाउँछन्। तर पछि तिनैले सरस्वती उ’च्छृ’ङ्खल छे भन्छन् उनले भनेकी छिन्। *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Previous हो’सियार !! बि’हे ल’गत्तै भु’लेर पनि न’गर्नुस् यी छ ग’ल्ती” अ’न्यथा घरबार बि’ग्रन स’क्छ!!
Next अ’फि’सको मि’टि’ङले पोखरा गएका यु’वा’यु’वती हो’टल रु’म’मै यस्तो अ’श्ली’ल ह’र्क’त गर्न थाले पछि !